Mudara raTinashe Muchuri: September 2012
VekuMasvingowe-e, musazoti hamuna kuudzwa
Mangwana tinenge tiri kwenyu
Vari Mucheke, udzaiwo vari kuRujeko
Vari kuRujeko morituma kudhorobha
Varikudhorobha murisvitse kuRhodene
Kuti Chigaro chiri kuuya muMasvingo mangwana
Kana mune huku takurai musazonzwa nzara nokuseka
Muchiti mukamboseka motsengera yehuku
Mukamboseka monwira zvinotapira
Ini ndichingodero kudavadika, imi muchingoseka
Kana zvenyu mukasazotadziswa kuombera kutenda kurapwa.
ZWA goes to Mutare
(writers at a rcent meeting)
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting in Mutare/Manicaland on Saturday 29 September, 2012 at the Turner Memorial Library Hall, 1 Queensway Street, Civic Centre at 09:00 - 12:00. This is coinciding with the Mutare Bookfair at the same venue!
Leaders of writers associations and individual writers who may or may not necessarily belong to literary associations around Mutare/Manicaland are all invited to this get-together.
Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Mutare/Manicaland writers and what we have managed to achieve thus far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion.
Our contact person in Mutare is Clever Simbarashe Kavenga: 0772691094.
Chair, Executive Committee, The Zimbabwe Writers Association(ZWA)BOARD MEMBERS: M B Zimunya(Chair) E Hwede(Deputy Chair) T Muchuri(Secretary)
Musashaikwa kugungano rananyanduri kuIntwasa/Intwasa Gathering of poets
Nhasi ndange ndiri paYGT ndichikurukura nyaya dzenduri. Ndaitawoka nduri iya inonzi ZVOKWEDU. ndikazoitawoka iya inonzi Pavi inova ndiyo inopendera zita rokuti Mutumwapavi. Mangwana ndinotakura CHIGARO changu ndakananga kuIntwasa uko ndinenge ndichidambura nduri ndinovaraidza nokutapidza vanhu. Kana uriko kuBulawayo huya pa GALLERY COURTYARD uzipirwe. Dzangu nduri ndinokupodza mwoyo unorwadza ukasvika kuma uchingoseka zvokuti vanhu vanoti ko nhasi zvaita sei shasha yekugara yakafundumwara. Asi dzoda kuti ware here. Kamuridzo kanenge kanemi kuBulawayo. Izwi rinokwira richidzika rinenge rinemi kuBuruwayo. Ngatisanganei tifare tichipembera. Mutumwapavi anenge achinyandura pfungwa dzavanhu nenduri dzinondurika senyuchi kana mago amaombera.
When Angels Weep/Kana nengirozi dzinochema
Mutambo wakanyorwa naBlessing Hungwe unotaura nezvekushungurudzwa kwavanasikana nenzira yekutengeswa vachinoshanda mabasa echipfambi kunyika yeSouth Africa. Ichi chinhu chava kuitika nguva dzakawanda muZimbabwe. Pane imwe nguva yatinoverenga mumapepanhau evanasikana vamwe vanozonzi vakauraiwa kune dzimwe nyika dzakatikomberedza, sakiso yekuti vasvike ikoku iri yekutiza nzara urombo nenhamo. Asi mukupedzesera unozoona kuti wafanana netsanga yebarwe yabuda mugango ichiwira muchoto. Blessing Hungwe uyo anozivikanwa neumwe mutambo wake wakatora mubairo weNAMA 2011 Best Outstanding Theatre Production unonzi 'Burn Mukwerekwere Burn' uyo unotaura nezvekurwiswa kwaiita vatorwa vainge vaenda kunotsvaka mafuromanyoro kunyika yeSouth Africa nevagari venyika iyi, akanyora uyu mutambo nenzira inosiririsa chose. Mutambo wake uyu unoburitsa rufu, nzara, kutambudzika, kurwadziwa, nhamo, kumbunyikidzwa, kupambwa, kubhinywa, zvirwere, marwadzo, kudzvinyirirwa, uyewo hupfambi.
Mumutambo uyu tinoona mutari wemufananidzo anotambwa naMichael Kudakwashe achitaura nezvekuda kutara mufananidzo weupenyu hwaSarita. Sarita musikana akatorwa kubva kuruwa rwake achivimbiswa kudzokera kuchikoro nababamunini vake Tito avo vanozomutengesa kumuIndia aiita basa rokutungamirira nzanga yepfambi kuSouth Afrika. Sarita atengeswa anosara achiita basa rokufadza varume pabonde avo vanenge vapaGupta mari. Iye sezvo ainge apambwa haaigona kutiza kubva panzanga yepfambi iyi. Sezvineiwo anozongoshamisika kwapera makore gumi nemanomwe achizosunungurwa ndokunzi adzokere kumusha. Paanosvika kumusha anowana babamunini vake Tito avo aifarira zvikuru vava ivo mumiriri weparamende wenharaunda yavo uyewo vava kunzi ndivo ishe wedunhu ravo. Nharaunda yaSarita yainge yasanduka zvokuti kwakanga kwatovawo nemigwagwa ine tara. Asi izvi zvose zvaisakiswa nekutengeswa kwevanasikana kunzanga dzepfambi dzekuSouth Africa.
Uyu mutambo unotambwa nenzira ine unyanzvi zvokuti vanouona vanonakirwa nawo. Unoburitsa musiyano uripakati pawo neimwe mitambo yatinomboona mune dzimwe nvzimbo dzinoitirwa mitambo yekuedzesera apo unoona vatambi vachingomhanya mudariro zvokuzosvika pakutsiurwa nekambo kaOliver Mutukudzi, 'sei kupaparika sehuku inopenga (Why paparapara like a crazy chicken, pfava)'. Mumutambo uyu unoona nyaya ichibhedhenuka zvakanaka apo unoona Sarita achitaura neumwe wake, zvakare neapo Sarita anotaura naBabamunini vake Tito, uyewo kuseri vanoisa mutinhimira kumutambo vachinyatsopindirana. Iyi nyaya haitaurwi naSarita bedzi, asi inotaurwawo nababamunini Tito, mutari wemufananidzo pamwe naSarita nababamunini Tito panguva imwechete. Izvi zvinoratidza hunyanzvi hwemunyori.
Nyaya iyi inodzidzisa zvakawanda chose. Zvimwe zvidzidzo zviri pamutambo uyu ndezvekuti apo tinenge tichitambira vanhu vanounza budiriro kumatunhu ekwedu, tinofanira kungwarira kuti vanhu ivava hapana zvimwe zvavari kutibira zvakakosha here. Kunyange tine nhamo neurombo kana nzara chaiyo, tinofanira kufungisisa tisati tavimba navo nokuti tinogona kuzounzirwa budiriro yeropa ravana vedu vachirikukura avo vanenge vachiendeswa kundopedzera simba nembeu dzavo mumabasa asingaunzi mufaro mumusha medu asi kusuwa. Vanasikana venharaunda yaTito vanowanikwa nekuparadzirwa rudzi nokuda kwaTito.
Zvakadaro hazvo munyori wemutambo uyu anofanira kukurudzirwa kuti aenderere mberi nokunyora mitambo nokuti paari pane tariro yebudiriro mune zvemitambo yekuedzesera. Chidiki chandinofunga uye chandinoona hangu sokuti chingada kuzogadziriswa ringangova zvaro izwi remunhu asina kudzidza rinodzoka rondoti gakei zvishoma. Sarita akatorwa asina kudzidza uye kunzanga yepfambi kwaaigara kwaisakurudzirwa chikoro asi kufadza varume pabonde. Asi ukanzwa madzamire akaita mutauro waanoshandisa unozoona kuti wakadzama zvokuti waifanira kunge uchitaurwa nomusikana akamboenda kuzvikoro zvemari yekuwanda, kana kuti akasvika kuyunivhesiti ndokuzokurirwa neiri rekushaikwa kwemabasa ndokuti chiregai ndindotsvaka mafuromanyoro. Sarita anobva aburitsa pachena magonero anoita munyori wemutambo uyu chiRungu. Munhu asina kudzidza saSarita anotaurawo chirungu chisina kunyatsotsetseka. Ndingangoti ndicho chega chimende asi aiwa mutambo uyu, unoda kuonekwa nemunhu wese anoda kuona mutambo wakanyatsorongwa. Mutambo uyu uchange uchiitambirwa kuTheatre In The Park kusvika musi wa15 Gunyana 2012 usati warova nhetserwa wakananga kuIntwasa Arts Festival koBulawayo kundovaraidza vagari veko uye avo vose vane chido neshuviro yekufadzwa nemitambo yekuedzesera..
Raramai sezvamunotaura, vadavadi vanokurudzirwa naVaMari
Picture by FUNGAI FOTO
Mutungamiri weNational Arts Council yeZimbabwe VaElvas Mari, avo vaiva muenzi akakosha pakuparurwa kweguwerere rehudavadi reYoung Africa Arts Festival(YAAF) kuChitungwiza nomusi wa1 Gunyana 2012, akati vadavadi vanofanira kurarama zvavanotaura nehudavadi hwavo. Vakataura kudai apo vaitura mashoko avo semuenzi anoremekedzwa paguwerere iri iro raiitwa pasi pedingindira raiti, 'Pemberera upenyu - ziva kodzero dzako dzepabonde nedzehutano hwechibereko (Celebrate Life- Know your sexual and reproductive health rights)’. “Mashoko angu kune avo vose vanoita zveudavadi, ndeekuti, murarame zvamunoparidza. Ndinodaro nokuti nguva zhinji tinoviga vadavadi vange varivo shasha dzokushambadza nezveHIV/AIDS. Chinonetsa ndechokuti ivo vacho vanenga vari pamberi pakushambadza ndivo zvakare vanozorigwa nacho. Tinofanira kushandura hunhu hwedu hune chekuita nezvepabonde. Ngatirarame zvine hunhu hwakanaka uye tishandise kodzero dzedu dzine chekuita nezvekubara pamwe nezvepabonde.” Vakadaro VaMari vachikurudzira kuzvibata pakati paavo vose vanoita zvehudavadi. Zvinodzimba sei kuti munhu anotsiura vamwe kuti vasiyane nekuita hunhu husina maturo ndiye otorwa nechacho chaanenga achiti vamwe musaita?
Vakarumbidzawo Young Afriva Centre iyo iri mumusha unogara vazhinji weChitungwiza nebasa guru rayiri kuita mukukurudzira nokudzidzisa vechidiki mabasa akasiyanasiyana emaoko ayo anozounza budiriro kunyika. Pamusoro pazvo, inotsigira guwerere retsika namagariro avanhu reYAAF. Vakati ivo, “Vanhu vose vari pano ngatisangonakidzwa chete nemimhanzi, nhetembo, mitambo yekuedzesera nezvimwe zvose zvichaitwa pano, asi ngatidzidze nokuti zvose zvichaitwa pano zvine zvidzidzo. Vakuru vepaYoung Africa Centre vaona zvakakodzera kuti vavandudze zivo, nokushandisa nyaya dzezvemitambo netsika kuti vasumudzire nyika kubudikidza nomuvadiki vachange vachiratidza zvipo zvavo pano. Ndinovimba kuti muchatora dzidziso yakakosha yakadai mugoishandisa kuvandudza upenyu hwenyu.”
Vakaenderera mberi vachiti, NACZ inokoshesa kushandiswa kwezveudavadi, mukuumba tsika nehunhu zvakanaka. “Ndinotarisa kuti zvamuchanzwa nokuona pano zvichaumba hunhu hwakakanaka hunoumba nyika kana muchinge makura. Muvewo vakashanduka, vane gwara rakanaka rekuumba nyika.”
Vakazotivo, kana mudavadi azosvika pakubvutwa norufu, haachafaniri kuvigwa semunhu asingakoshi nekuti National Arts Council yeZimbabwe inotungamira chirongwa chekuvigwa kwevafi vanokosha chinodaidzwa kunzi, Celeberity Cover. Vadavadi vanokurudzirwa kubhadhara madhora makumi mashanu ekuAmerica (US$50, 00) vobva vatopedza izvo zvinozovapa kuva vakachengetedzeka kana vachinge vafa. Hurongwa hwekuviga vafi uhu mubatanidzwa pakati peNACZ neCell Funeral Holdings. VaMari vakakurudzira kuti avo vose vasati vapinda muhurongwa hwekuvigwa uhu vapindewo mahuri vasazosekwa kana vachinge vafa vachipomerwa mhosva yekuva vasina kurongeka. Nyaya yekupinda muhurongwa hwekuvigwa wafa yakakosha chaizvo nekuti nguva zhinji vamwe vadavadi kana hama dzevadavadi dzinozoita mudememudeme kuti afa avigwe asi iye anga ari munhu akakosha kudaro muhupenyu hwevanhu nenyika. Izvi zvinozoita kuti vanhu vaone sekuti ndima yehudavadi inopindwa nemarombe.
VaMari vakazotenda avo vakatsigira guwerere reYAAF iri avo vaisanganisira, EU, SAFAIDS, Culture Fund of Zimbabwe pamwe nehutungamiri hwekanzuru yeguta reChitungwiza. Vakazokurudzirawo varongi veguwerere reYAAF, kuti vadaidzewo hutungamiri hwenharaunda yavo hunosanganisa vamiriri veparamende, makanzera, navezvemabhizimisi emunharaunda iyi kuti vazvionerewo mabasa anoitwa nevanhu vemunharaunda yavo pamwe nevamwe vanenge vakakokwa.
Mushure memashoko akakosha aVaMari, kwakazova nokuimbirwa nziyo naJigaz, Micky D, pamwe nemakwikwi emutambo wekuedzesera pamwechete nanaNyanduri. Varongi veguwerere iri vanofanirawo kugadzirisa nyaya yaapo vadavadi vanenga vachiitira hudavadai hwavo. Dariro rinoitirwa hudavadi iri kure zvikuru neavo vanenge vachiita hudavadi hwavo zvokuti zvinoita juti vadavadi vaone vanhu sekuonekwa kunoitwa zvinhu neshiri iri mudenga izvozvinozokanganisa kudyidzana kwakanaka kwavadavadi nevakurudziri vavo.
- September 11, 2012 1 comment: Links to this post
VaMugabe vakapiwa mukombe
Mutungamiri wenyika yeZimbabwe VaMugabe vachipa chidzidzo chinokosha pakuvhurwa kwezviratidzwa zvetsvagurudzo neutosvo zvemugore rezviuru zviviri namakore gumi nemaviri kuHICC. Mufananidzo naMasimbaNgondonga
Mushure mekupa chidzidzo chakakosha pamutambo wekuvhurwa zviripamutemo kwezviratidzwa zvetsvagurudzo, neutosvo muZimbabwe zvegore rezviuru zviviri nemakore gumi nemaviri (Research and Intellectual Expo 2012), VaMugabe vakatambidzwa mukombe sechipo chekuratidza hunyanzvi hwavo mune zvetsvagurudzo neutosvo kubudikidza nechidzidzo chavo chakatora maawa anopfuura matatu icho chavakapa kuvadzidzi vekumakorichi, mayunivhesiti pamwe nevamwe vakokwa vanoremekedzwa vaivapo. Chidzidzo chaVaMugabe chaibata nharaunda dzakawanda dzinosanganisira zvedzidzo, tsika namagariro, zveutano, zvehunhu, zvekuumba hupfumi, zvevadavadi nezvimwewo zvakadaro. Chidzidzo ichi chaiva nenheyo dzacho kubva pakuita kwaMbuya Nehanda musi uyo wavamba kubhabhatidzwa kuti vafe vave mutenderi weChikristu.
Mune zveudavadi, VaMugabe vaiti, "Kudzidza hakuperi. Benzi ndiro roga rinoti zvino ndazodzidza zvakakwana zvokuti handichada kudzidzazve nokuti hapachina chandisingazivi. Hazvina basa kuti una madhigirii mangani, unoramba uchingova mudzidzi. asi zvino zvava kuda kutarira kuti ndeipi mhando yedzidzo yakanakira nyika uye nderupi ruzivo rwekushandisa mumabasa rwodiwa nenyika parinhasi."
Vakaenderera mberi vachitaura nyaya yekuti mayunivhesiti haafaniri kungopomerwa mhosva yokusasumudzira nokuvandudza dzidzo munyika nokuti hurongwa hwedzidzo hunorongwa zvichabatsiranwa naavo vane zvinzvimbo zvepamusoro muhurongwa hwehurumende. "Zvino kana vane masimba vacho vane ruzivo rushoma zvinosakisa kuti kudzidza kuve dambudziko," vakadaro vaMugabe.
Vakataurawo kuti vanoda kuti senyika tivanduke mune zvinechekuita nehudavadi hwakasiyanasiyana. Vakanyanyosimbisisa pane zvekudetemba nezvezvekuimba apo vaiti, mayunivhesiti haafaniri kungodzidzisa kana kuva nehurongwa hwedzidzo yokudzidzisa vana vanozoshandisa dzidzo yavo kutsvagisa basa, asi anofanira kuvawo nehurongwa hwekupawo zvidzidzo kune avo vanoda kuzoshandisa dzidzo yavo mumabasa avo okuzvishandira.
Vakagoveranawo nevanhu ruzivo rwavakawana apo vakashanyira nyika yeChina kekutanga mumakore mashoma nyika ichingowana kuzvitonga apo vanoti ivo tinofanira kutevera gwara iri iro rinoti, 'tikwerete ruzivo rwakanaka kubva kune vakatikomberedza, kana takwereta kudaro todzidza maitiro avo, tanyatsodzidza tobva tazvivandudza kudarika varidzi vakazviita,' izvo zvinova zvakaitwa neChina. Vakambosetsa vanhu apo vaiti vakaverenga mupepanhau kuti mutungamiri weGermany aienda kuChina kundotsvaka rubatsiro rwemari kuedza kugadzirisa hupfumi huri kuzhekezheka. Vakabva vati, "Isu taitarira kuEast asi ivo vava kuenda kuEast." Vakakurudzirawo vadavadi kuti vasangosara shure asi vanofanira kukwereta zvidavado zvinoitwa nevadavadi vamamwe marudzi nedzimwe nyika zvokuvandudza hunyanzvi hwavaimbi pamwe nekudzama kwehudavadi hwenyika yedu. Vakatoseka kuti vanhu vachiri kungoramba vachishandisa vanaChaucer muzvikoro uyo anova munyori wechiRungu wekare pane kuti vashandisewo uvaranomwe hwemuno hwakanyorwa zvinounyanzvi hunodarika hwanaChuacer. Mashoko avo aya anogona kuzadziswa chete kana kukava navanyori vanosumudzira uvaranomwe hwemuZimbabwe nekukwereta zvidavado kubva kune vanyori vemamwe marudzi.
Vakataurawo nyaya yekudzidzira basa mudzidzi achitoita basa racho (apprenticeship) iyo yakambovirikira zvikuru apo Zimbabwe yainge ichangowana kuzvitonga. Ndakaonawo kuti kundima youdavadi ndiko kuri kushandiswa mhando yekudzidza iyi zvakanyanya asi zvakare inofanira kusumudzirwa kuitira kuti zvehudavadi zvirambe zvichisumukira nekuvandudzika. Vashoma vanyori vemuZimbabwe vakawana zvidzidzo zvekunyora nyaya, mabhuku nezvemitambo, vazhinji vavo zvakabva muchido nechipo chekunyora. Vanyori vanhu vanoda kutaura nyaya izvo zvinozoita kuti vangonyora zvichibva pasi pemoyo yavo. Asi ndivo vanonzi naVaMugabe vanochifanira kuverenga zvavamwe kuitira kuti vavanduke makunyora kwavo uye kuti vasasarire kumashure nguva dzose.
Vakabatawo nyaya yemabhuku epadandemutande zvichenzaniswa nemabhuku edu ataiziva kare. Vakati ivo, "Bhuku rinosiya matsimba mundangariro dzomuverengi zviranane kudarika kombuhyuta " Sokuona kwavo "Zvaizonaka kana kushandisa bhuku sokuriziva kwedu kwakare kwaingoitwa kuti kufambidzane pamwe nokuverenga bhuku pakombuyuta." Ipapa vakabva vabata nyaya yokuverengwa kwamabhuku navana vamazuva ano avo vavaiti vanongoda kutamba mitambo yepamakombuyata vasingaverengi mabhuku anovapa ruzivo. Vakawedzera vachiti zvizhinji zvacho zvinoverengwa apa hazvina kana nemusoro wose. Vakati vana ava vanongoverenga mabhuku kunge chete vavakunyora bvunzo kana kuti vapiwa basa rokuita kumba kubva kuchikoro. Nguva yavo zhinji yava yekuona zvacho zvavanorambidzwa navabereki kuti vasaona kunyanya kana vabereki vavo vasipo. Vakashumbawo kuti dai nyika dzapasi rose dzagara pasi kuti pawanikwe nzira ingaitwe kuti paongororwe zvinoiswa pamadandemutande zvichizoonekwa nevana nokuti imwe yemifananidzo yacho haivaki munhu.
Ndipowo pavakabva vangobata nyaya yehunhu hwevanhu vemunyika vachiti vazhinji vane masmall house avo kunyange ivo havo vasingazivi kana ari maduku zvechokwadi sekutaura kwavanhu. Vakakurudzira kuti vanasikana vasangova dorawatora uyewo varume vasiyane nenyaya yekusada kupfuurwa nemarokwe vachiti vaidisa chose kuti vanhu venyika ino vave nehunhu kuitira kuti vagovaka nyika vari vanhu vane hunhu hwakanaka. Vakatiwo hunhu hwemunhu hunobva kuvabereki, kuzvikoro zvatinodzidza, vakuru vari munharaunda dzedu, kudzikereke kwatinosanga, saka naizvozvo zvikoro zvedzidzo yepasi kusvika kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinofanira kuita basa rokuumba munhu azere. Pamusoro pazvo vakati zvikoro zvinofanira kuumba munhu anodisa chose kudyidzana navamwe vanhu, munhu anoda kushandidzana navamwe vanhu, anoda kuumba makambani akabatana navamwe kwete kuita Karikoga negumi rake remiseve. Vakazodzokororawo mashoko omudzidzisi wavo uyo akavadzidzisa vachiti akati, 'Ukasima chiito, unokohwa muitiro. Ukasima muitiro, unokohwa hunhu. Ukasima hunhu, unokohwa rombo rehupenyu.' Vakabva vapedzisa vachiti nesuwo ngatione kuti tasimei muhupenyu hweavo vachiri kuyaruka.
Tosongana kuIntwasa Arts Festival koBulawayo
Hama vadiwa, mose munofarira kutandara nekutandadzwa neni ngatisangenei kuchikamu chananyanduri kumutambo wavadavadi weIntwasa Arts Festival koBulawayo musi wa21 na22 Gunyana 2012. Ngatisanganei tichiridzirana muridzo pamwe nokudetemberana pamazuva maviri aya tiri paGallery Courtyard kuBulawayo.
Intwasa 2012 Poetry Program
FRIDAY 21 SEPTEMBER - GALLERY COURTYARD
Host: Mgcini Nyoni
Emmah Mabye (SA),
Chigo Gondwe (Malawi),
Tim Mwaura (Kenya),
5pm – 7pm - GALLERY COURTYARD
Host: Bhekumusa Moyo
Musashaikwa kugungano rananyanduri kuIntwasa/Intwa...
Raramai sezvamunotaura, vadavadi vanokurudzirwa na...